अस्ट्रेलियामा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२०’ को शुभारम्भ, भट्टराईको र्‍यालीलाई रोक्यो सिड्नी प्रहरीले भन्ने समाचारको खण्डन यसरि गरे मन्त्रि भट्टराइले ! « Etajakhabar
अस्ट्रेलियामा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२०’ को शुभारम्भ, भट्टराईको र्‍यालीलाई रोक्यो सिड्नी प्रहरीले भन्ने समाचारको खण्डन यसरि गरे मन्त्रि भट्टराइले !
प्रकाशित मिति : २२ पुष २०७६, मंगलवार १७:०५
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमणका लागि अष्ट्रेलियावासी र यहाँ रहेका नेपालीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् ।
भ्रमण वर्ष सन् २०२० को अन्तरराष्ट्रिय रुपमा आज यहाँ औपचारिक शुभारम्भ गर्दै उनले जीवनको नयाँ अनुभवका लागि नेपालको भ्रमण गर्न सबैमा अनुरोध गरेका हुन् ।
प्राकृतिक हिसाबले विश्वकै धनी देश नेपालमा भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै उनले, “लाइफ टाईम एक्सप्रियन्सका लागि भ्रमणको निम्तो दिन चाहान्छु ।” नेपालमा विशेष तयारीका साथ यस वर्षलाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन लागिएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको पर्यटकीय महत्वका बारेमा जानकारी दिए ।
काठमाडौँ र अष्ट्रेलियाबीच सिधा उडानका लागि सम्झौता पछि कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको भन्दै उनले दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताए । आफ्नो मन्तव्यको शुभारम्भमा नै मन्त्री भट्टराईले डढेलोका कारण अष्ट्रेलियावासी जनतामा परेको समस्याप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले मृतकहरुप्रति समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
छिट्टै डढेलो नियन्त्रणमा आएर यहाँको जानजीवन सहज हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा न्यू साउथ वेयल्स राज्य संसद्का सभामुख जोनाथन वडीले नेपाल सुन्दर रहेको भन्दै भ्रमणका लागि धेरैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियावासी जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा अष्ट्रेलियका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहालले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा आनुरोध गरे । आफू र आफ्ना यहाँका नेपाली एवं अष्ट्रेलियन साथीहरुलाई भ्रमणका लागि नेपाल लैजान उनको आग्रह थियो । सो अवसरमा अष्ट्रेलियाका पक्ष र प्रतिपक्ष दल एवं काउन्सिलका प्रतिनिधिसहितको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम शुरु हुनुअघि सिड्नीको सर्कुलर क्येवमा मौन जुलुसमार्फत पर्यटन वर्षको प्रवद्र्धन पनि गरिएको थियो ।
अहिले सिड्नीमा नै यहाँका राजनीतिक दल, कूटनीतिज्ञ, पर्यटन व्यवसायी, व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली महासङ्घका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिको उपस्थितिमा भ्रमण वर्षका सम्बन्धमा छलफल एवं रात्रिभोज शुरु भएको छ ।
गत वर्ष अष्ट्रेलियाबाट ३३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । यो सङ्ख्यालाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउन राजदूतावास लागि परेको छ । गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ र न्यू साउथ वेयल्सको महावाणिज्य दूतावासको सहयोगमा अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतावासले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
यसै क्रममा भट्टराईले सिड्नी प्रकरणमा प्रस्टिकरण दिएका छन् । मंगलबार सामजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पर्यटनमन्त्री भट्टराईले मौन जुलुस मार्फत पर्यटन बर्षको प्रबर्द्धन पनि गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले अस्ट्रेलीयाको सिड्नीमा नेपाली राजदुतावासको आयोजना तथा एनआरएनएलगायतका संघ संथाको सहयोगमा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को शुभारम्भ कार्यक्रम भब्य रुपमा सम्पन्न भएको लेखेका छन् ।
एनएसडब्लु स्टेटका सभामुख सहित अस्ट्रेलीयाका पक्ष र प्रतिपक्षी दल र नगरपालिकाका प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा उनीहरुका तर्फबाट शुभकामना मन्तब्य पनि ब्यक्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले काल्पनिक र गलत समाचार सम्प्रेसण गरेर मुलुकको प्रतिस्ठा र मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा किन खेल्न खोजिएको हो ? नियत गम्भीर छ ! भनि प्रश्न समेत गरेका छन् ।
भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसार गर्न अष्ट्रेलिया पुगेका मन्त्री भट्टराईले नेतृत्व गरेको र्‍यालीलाई सिड्नीस्थित ओपेरा हाउसको सुरक्षाकर्मीले रोकेको थियो । कार्यक्रम प्रचारप्रसार र व्यवसायिक लाभका लागि भएको लगायतका कारण देखाउँदै सुरक्षाकर्मीले ओपेरा हाउससम्म जान रोकेको हो। यसलाई अधिकार सम्बन्धी कानुन भन्दा बाहिर रहेकाले र्‍यालीमा रोक लगाइएको सिडनी काउन्सिलले जनाएको छ।
‘यसरी गरियो गलत प्रचार’
शुभारम्भ कार्यक्रमपछि मौन र्‍याली समेत निकालिएको थियो । सर्कुलर किस्थित कस्टम हाउसदेखि ओपेरा हाउससम्म निकालिएको मौन र्‍यालीमा नेपालीहरु आ–आफ्नो सास्कृतिक पहिरन र पहिचान सहित सहभागी थिए ।
र्‍यालीमा माननीय मन्त्री भट्टराईसँगै अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम महेशराज दाहाल, कन्सुलरहरु दीपक खड्का र चन्द्र योन्जनसहित १०० भन्दा बढी सहभागी थिए । तर, ओपेरा हाउस पुगेपछि सुरक्षाकर्मीहरुले सहभागीहरुलाई व्यवसायिक ब्यानर सहित नजान अनुरोध गरेका थिए ।
झन्डा र ब्यानर बोकेका मानिसभित्र पस्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई रोकेर के–को झन्डा हो ? किन ल्याएको ? सामान्य सोधपुछ गरेका थिए । त्यसपछि सहभागीहरुले बढो अनुशासनपूर्वक ब्यानर हटाएर ओपेरा हाउस पुगेका थिए ।
मन्त्री सहितको टोली पनि ओपेरा हाउसभित्र पुगेर सामुहिक तस्बिर खिचाएका थिए । तर बाहिर भने यही बिषयलाई कार्यक्रममै अबरोध भनेर प्रचार र प्रपोगान्डा गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी नै केहीले कार्यक्रममा अबरोध भयो भनेर स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई समेत गलत सूचना दिएका थिए । राजदूत दाहालले सुरक्षाकर्मीले गरेको त्यही सोधपुछलाई बढाइचढाइ गरी समाचारहरू आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले गलत सन्देश प्रवाह भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरोक छन् । उनले यस्ता भ्रम फैलानमा गम्भीर नियत लुकेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘काल्पनिक र गलत समाचार सम्प्रेषण गरेर मुलुकको प्रतिष्ठा र मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा किन खेल्न खोजिएको हो? नियत गम्भीर छ ।’
काठमाडौ । कोरोनाका कारण बाँकेमा एक विशेषज्ञ चिकित्सकको निधन भएको छ । बिहीबार भेरी अस्पतालमा
गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिप्रति अभिनेत्री ऋचा शर्माले जनाईन् आपत्ति
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय देशमा बढी रहेको ब’ला’त्का’रका घटनाहरुप्रति हिजो मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’
सुशान्त केसमा ट्रोल बनेका सलमानले यो वर्ष पनि बिगबोस सञ्चालन गर्ने, के यो वर्षको बिगबोस पहिला जत्तिकै हीट होला त ?
एजेन्सी । बिग बस १४ सुरु हुने तयारीमा छ । हरेक पटक झैं सलमान खान
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:५५
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:५२
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:३७
मन्त्री बन्दै शान्ता चौधरी, उनीसंगै मन्त्री बन्दैछन् यी सासंदहरु
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:१८